Govera Muchinjikwa Laser Module, Muchinjikwa Lasers, Muchinjikwa Bvudzi Laser Kubva China Mugadziri
Tsanangudzo:Muchinjikwa Laser Module,Muchinjikwa Lasers,Muchinjikwa Bvudzi Laser,Muchinjikwa Mutsetse Laser,,
 HomeProductsLaser ModuleMuchinjikwa Laser Module
Muchinjikwa Laser Module (Total 8 Products)
Zvigadzirwa zve Muchinjikwa Laser Module , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Muchinjikwa Laser Module , Muchinjikwa Lasers vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Muchinjikwa Bvudzi Laser R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Izvi dzvuku muchinjikwa mutsetse Laser module iri maindasitiri giredhi Laser. Iyo laser diode ine yakasimba kugadzikana uye hwakareba hupenyu hwehupenyu. iri rakanakira rakasiyana-siyana rakaderera simba laser zvinoshandiswa, senge kunongedzera...
Iyi compact tsvuku pamuchinjikwa laser module inongova 6 x 11.2 mm chete. Red Line Laser module yakanyatso kuzvidzora ine laser diode, plastiki optical lens. Mutyairi wedunhu ari kunze kwekasi.Tsanangudzo: Wavelength: 635nm, 650nm Simba Rinobuda:...
Iyi Blue Cross Laser module inogadziriswa, uye izere -zvayo ine laser diode, girazi rinoona lens uye driver wedunhu. Tsanangudzo: Wavelength: 405nm Simba Rinobuda: 100mw, 150mw, 200mw Kukura kweCasing: 16 x 70mm Magetsi: DC3-5V Optics: Girazi lens...
Bhuruu Muchinjikwa Laser module izere nekuzvimiririra-iine laser diode, girazi rekuona lens uye mutyairi wedunhu. 450nm yakachena girini, muchinjikwa wakachena uye wakajeka.Tsanangudzo: Wavelength: 450nm Simba Rinobuda: 80mw, 100mw, 500mw, 1500mw,...
Unit Price: 30~100
Green Cross Laser module izere nekuzvidzora-iine laser diode, girazi optical lens uye driver wedunhu. 520nm yakachena girini, muchinjikwa wakachena uye wakajeka.Tsanangudzo: Wavelength: 520nm Simba Rinobuda: 12mw Kukura kweCasing: 22 x 110mm...
Green Cross Laser module yakazara zvizere-ine laser diode, plastiki optical lens uye driver wedunhu. Ukobvu hwemuchinjikwa hunogadziriswa. Uye isu tine akati wandei fan fan yesarudzo yako.Tsanangudzo: Wavelength: 520nm Simba Rinobuda: 5mw Kukura...
Red Cross Laser module yakazara zvizere-ine laser diode, plastiki optical lens uye driver wedunhu. Ukobvu hwemuchinjikwa hunogadziriswa. Uye isu tine akati wandei fan fan yesarudzo yako.Tsanangudzo: Wavelength: 635nm Simba Rinobuda: 5mw Kukura...
Unit Price: 4~20
Red Cross Laser module yakazara zvizere-ine laser diode, plastiki optical lens uye driver wedunhu. Ukobvu hwemuchinjikwa hunogadziriswa.Tsanangudzo: Wavelength: 650nm Simba Rinobuda: 1mw, 5mw, 10mw, 20mw, 30mw, 50mw Kukura kweCasing: 12 x 40mm...
China Muchinjikwa Laser Module Vatengi
Realpoo Optics inyanzvi yekugadzira ma-laser module munyika. Yedu kambani inowana ruzivo rweinjiniya, Nyanzvi yekugadzira tambo, yakanaka muchina wekuyedza pamwe nechiridzwa chemberi. Nezvakanakira, tinopa laser module, laser diode, laser mwenje, laser danho mwenje, laser eripheral chigadzirwa, pcb redunhu dhizaini uye kuvandudza uye zvichingodaro. Tinogona kuona yakakwira vanokwanisa mwero.
Muchinjikwa Laser Module Muchinjikwa Lasers Muchinjikwa Bvudzi Laser Muchinjikwa Mutsetse Laser Michini Laser Module